संविधान नमाने ओलिले राउटेको अलिखित कानुनबाट केही सिक्ने कि ? – www.agnijwala.com
संविधान नमाने ओलिले राउटेको अलिखित कानुनबाट केही सिक्ने कि ?
काठको भाडाकुडा बनाइ बेचेर जंगली जीवन बिताउने राउटे समुदाय बेलाबेलामा चर्चामा आइरहेको छ। गत आइतबार राउटे युवती माथी गैर राउटे युवाहरूले गरेको दुव्र्यवहारले देश भरीका सामाजिक संजाल भरिएका छन । गैर राउटे युवाहरूले राउटे युवती माथी गरेको दुव्र्यवहार जस्तै प्रधानमन्त्री केपि ओलिले संविधान माथी दुव्र्यवहार गरेका छन। रास्ट्रपति पद र प्रधानमन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै संविधान माथि धावा बोलेका छन । राउटे समुदायमा पनि महिलालाई उच्च सम्मान गर्ने चलन छ।तर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले महिला रास्ट्रपतिको अधिकार नै खोसी महिला माथी सम्मान नगरेको संविधानका जानकारको भनाइ छ।
राउटे बाहिरी समाजबाट टाढा, जंगलका कुना कन्दरामा जीवनयापन गर्दै आएको अल्पसंख्यक समुदाय हो ।लोप हुन लागेको यस समुदायको पनि महिलालाई उच्च सम्मान गर्ने अलिखित कानुन रहेको छ। राउटेको मौलिकतामाथि गैर राउटे युवाहरूले गरेको हमलालाई ओलिको प्रतिगमन संग तुलना गर्दा प्रधानमन्त्री ओलि राउटे समुदाय जत्तिकै सचेत र नैतिक मानिस नभएको बुझिन्छ।किनकी राउटे समुदायले अलिखित कानुनलाई त मान्दै आएको छ भने ओलिले ठुलो बलिदान पछि बनेको संविधानलाई मानेका छैनन् ।
कस्तो छ राउटेको कानुन र प्रचलन ?
राउटे समुदायमा माफी तथा जरिवानाको संस्कार छ । यो समुदायमा नैतिकताको ठुलो ख्याल गरेको पाइन्छ । कसैले केही गल्ती गरेमा मुखियाको अगुवाईमा पञ्चायती अगुवाहरु बसेर दण्ड, जरिवानासम्बन्धी निर्णय लिने अलिखित कानुन रहेको राउटे मुखियाको भनाइ छ। यस अन्तर्गत जरिवाना तिराउने र माफी दिने प्रचलनसमेत रहेको उनले बताए ।
मुखियाले भने ‘हामिहरु पनि चेतनशील छौ । अप्रिय निर्णय कहिल्यै गर्दैनौ,’ मुखियाको यस्ता भनाइ बाट हाम्रा प्रधानमन्त्री केपि ओलिले राउटे समुदाय बाट केही सिक्ने कि ?